» फेसबुक र ट्वीटरमा अब हुन्छ नक्कली अकाउन्टको पर्दाफास, अब खुल्छ पोल
९ बैशाख २०७५, आईतवार ०१:०७
एजेन्सी, ९ बैशाख । के तपाईँ फेसबुक वा ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजालमा फेक –नक्कली) आईडी बनाईरहनुभएको छ ? न केटी बनेर दुनियाँलाई झुक्काईरहनु भएको छ कि ? उसो भए सावधान अब तपाईको शैतानी दिमागलाई चुनौति दिन अर्थात तपाईको पोल खोल्न वैज्ञानिकहरुले नयाँ तरिका विकास गरेका छन् ।
फेसबुक तथा ट्वीटरजस्ता सोसल नेटवर्किंङ साइटहरुमा कुनै नक्कली अकाउन्ट पत्ता लगाउन अब सहज हुनेछ । वैज्ञानिकहरुले यसका लागि एक नयाँ एल्गोरिदम विकसित गरेका छन् । विभिन्न एजेन्सीहरुमा आएको समाचार अनुसार, यो नयाँ विधि उक्त धारणामा आधारित छ कि नक्कली अकाउन्टमा प्रयोगकर्ताका आचरण सक्कली अकाउन्टमा भन्दा असामान्य हुन्छन् । नक्कली अकाउन्टबाट मानिसहरुले आफ्नो नेटवर्कमा रहेका अन्य प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक तथा आपत्तिजनक लिंकहरु पठाउँदछन् ।
Source : technocab.pk
इजरायलको बेन गुरियोन विश्वविद्यालयका प्रमुख शोधकर्ता दिमा कगान भन्छन्, ‘हालैका दिनमा प्रयोगकर्ताको गोपनियता सुरक्षित राख्नमा असफलता हात परेको विषया चिन्ताजनक खबर आएका छन् । चुनाव प्रभावित गर्नका लागि रुसद्धारा सोसल मिडियाको प्रयोगको जानकारी आएपश्चात अब सोसल मिडियाका फेक अकाउन्टहरुलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नु आवश्यक भैसकेको छ ।
उनका अनुसार नयाँ एल्गोरिदमको परीक्षण विभिन्न १० प्रकारका सोसल नेटवर्कमा रहेका नक्कली तथा सक्कली डाटा संग्रहहरुमा गरिएको थियो र दुबैमा यो विधिले निकै उत्साहजनक नतिजा प्रदान गरेको छ । सोसल नेटवर्क एनालिसिस एण्ड माइनिंग पत्रिकामा यो शोध प्रकाशित छ ।
(अप्रिल २२ सन् २०१८)
हनिगेनबाट सजिलै पैसा कमाउने तरिका
जुम एकाउन्ट नभए पनि यसरी जुम मिटिङमा बस्नुहोस्
निःशुल्क कोरोना खोपको लागि फारम भर्ने तरिका
नागरिक एपबारे जान्नुपर्ने ३ कुराहरु